ခွန်အား - Khun Arr, 64 West 192nd Street, New York, NY (2021)
မြန်မာနိုင်ငံသတင်း၊ နိုင်ငံတကာ သတင်း၊ ဖျော်ဖြေရေး သတင်း၊ ပျော်ရွှင်စရာ posts တွေတင်ပေးပါမည်။ Funny and inspirational contents all in one place.
ကျွန်တော်သည်ခြေလက်ထုံကြင်သောရောဂါဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နားလည်သောသူများကဆေးလိပ်အလွန်အကျွံသောက်သောကြောင့် သွေးကြောပိတ်ချင်သည်ဟုပြောပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် ၂ နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပါပြီး။ ထပ်မဖြစ်တော့ပါ။ ထိုအရွက်ကိုတစ်ကြိမ်ထဲတွင်များများစား၍မရဟု တတ်ကျွမ်းသော ဆရာများကပြောပါသည်။ လူအပေါင်းတို့၏အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍တင်ပြလိုက်ပါသည် ။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
သင်ဒါတွေ သိပြီးပြီလား 😊😊😊
ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။😉😉😉😉
ဂျပန်အပျော်တမ်း အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာ လက်ရာ
#Credit - Original Uploader
like & Share လုပ်သွားဖို့ မမေ့နဲ့နော် 😉😉😉
နီနီခင်ဇော်ဆိုသွားတာ စွန်းချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ... နားထောင်ကြည့်လိုက်...
Like & Share လုပ်ထားလိုက်နော်.. အကောင်းဆုံးတွေဘဲ တင်ပေးသွားမယ်။
ဓါတ်ဆရာတွေ ဓါတ်ဖမ်းတာတော်လိုက်တာ ☀️☀️☀️
နေကြက် ချိန်ကို အကောင်းဆုံး
လူတစ်ယောက်မှ မနေလို့ သရဲမြို့ တော်တွေလို့ 
နာမည်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံတကာက စွန့် ပစ်မြို့ တော်တွေ
အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံက ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးတွေ
Source: မ​ရွှေမိုး - ကိုရီးယား
Via: Thandar Theint
မူရင်း Link -
ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ... ဟာသမို့လို့.. ပေါ့ပေ့ါပါးပါး ရယ်ကြတာပေါ့.. :) :)
Like & Share လုပ်ထားပါ.. ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူများ အတွက်သာ..
တကယ့်ကို သဒ္ဒါတရား ထက်သန်လှပါတယ်။ 🙏🙏🙏
မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်က ဘုရားပြုပြင်ရန် သိန်းတစ်ထောင်ကျပ် လှူ သောအလှူ ရှင်ဇနီးမောင်နှံ
အရမ်းကို ရယ်ရလွန်းလို့ပါကွယ်... ကြိုက်သလိုကြည့် ကြိုက်သလောက်ရှယ်နော်.. :D :D
ဒေါ်လာ ၁၂၃ သန်းတန် ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ အိမ်ကို သွားမလည်ချင်ကြဘူးလား 😱😱😱
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ဟာ အရမ်းခန့်ညားကြီးမားတာဟာ မဆန်းပါဘူး။ အဲဒီအိမ်ဆောက်ဖို့ ၇ နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရပြီး ဒေါ်လာ ၆၅ သန်းကုန်ကျပါတယ်။ ခုချိန်ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင် ၁၂၃ သန်းလောက်တန်ပါတယ်။ စတုရန်းပေ ၆၆၀၀၀ ကျယ်တဲ့ အဲဒီအိမ်ဟာ နည်းပညာအဆင့်မြင့်မားစွာ ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တွေအတွက် အဆင့်မြင့်အာရုံခံစနစ်ကို တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေဟာ သူတို့ကိုပေးထားတဲ့ ကုတ်နံပါတ်တွေကို ရိုက်ထည့်ပြီး သူတို့ကြိုက်တဲ့ အပူချိန်နဲ့ အလင်းရောင်တောက်ပမှုတွေကို ထိန်းညိုထားလို့ရပါတယ်။ အဲ့တာတွေက သူတို့ရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လိုက်ပြောင်းလဲနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သီချင်းဖွင့်ထားရင်လည်း သူတိုသွားရာနောက်ကို နံရံနောက်မှာ ထည့်ထားတဲ့ Speaker တွေကနေ သီချင်းသံက လိုက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုက်မတူတဲ့ လူနှစ်ယောက် တစ်ခန်းတည်းနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ မရှင်းပြထားဘူး။ ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ အိမ်ဘေးပတ်ပတ်လည်က သဘာဝ သစ်တောတွေဟာ အိမ်တွင်းက အပူတွေ အပြင်ကို မဆုံးရုံးသွား ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၈၀၀၀၀ ဖိုးလောက်ရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာ screen တွေကို အိမ်အနှံ့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တို့ကြိုက်ရာ နံရံပုံတွေတို့ ပန်းချီကားပုံတွေတို့ကို ခလုတ်တစ်ချပ်နှိပ်ပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
ပေ ၆၀ ရှည်တဲ့ ရေကူးကန်မှာ ရေအောက် သီချင်းနားထောင်လို့ရအောင်လဲ လုပ်ထားပါတယ်။
စတုရန်းပေ ၂၃၀၀ ကျယ်တဲ့ ဟောခန်းမှာဆိုရင် လူ ၁၅၀ လောက်ကို ညစာကျွေးဧည့်ခံလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် များပြားလှတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ၂၄ ခန်းရှိပါတယ်။ မီးဖိုချောင် ၆ ခန်းရှိပါတယ်။ လူ ၂၀ ဆန့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံလည်းရှိပါတယ်။ ပေါက်ပေါက်စုတ်လုပ်စားဖို့ စက်လည်းရှိပါတယ်။
အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာ ကားထားစရာနေရာတွေရှိပြီး စုစုပေါင်း ၂၃ ကားထားလို့ရပါတယ်။
ဘီလ်ဂိတ်ဟာ သူအကြိုက်ဆုံး မေပယ်သစ်ပင်ကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး သစ်ပင်ခြောက်သွေ့လာရင် ရေကို အလိုအလျောက်ဖြန်းပေးတဲ့ စနစ်ကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
စတုရန်းပေ ၂၅၀၀ ကျယ်တဲ့ အားကစားခန်းမလည်းရှိပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက သူ့ရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်ဖို့ လေလံဆွဲတုန်းက ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀ ကျပါတယ်။ အဲ့ကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို သူက အလှူအတန်းလုပ်လိုက်ပါတယ်။
အာဖဂန်နန်စတန်နိုင်ငံမှာ ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတစ်ခု တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းရုပ်ပွားတော် ၁၀၀ ကျော်နဲ့ ဧက ၁၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းအဆောက်အဦးနေရာကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
စက်လှေကား စီးရင် သတိထားကြပါ အထူးသဖြင့်ကလေးတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ကြပါ
တကယ်ပေါက်ကရတွေ လုပ်နိုင်လွန်းတယ် 🤣🤣🤣
တစ်ပုံချင်းစီနှိပ်သွားကြည့်လိုက် တကယ့်ဟာဒွေ 😀😀
နေ့စဉ်အမြဲမပြတ် ဗဟုသုတတွေ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ် 😊😊😊 #SeeFirst လုပ်ထားဖို့ မေ့နဲ့နော်။
Be the first to know and let us send you an email when ခွန်အား - Khun Arr posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
နီနီခင်ဇော်ဆိုသွားတာ စွန်းချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ... နားထောင်ကြည့်လိုက်... Like & Share လုပ်ထားလိုက်နော်.. အကောင်းဆုံးတွေဘဲ တင်ပေးသွားမယ်။
ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ... ဟာသမို့လို့.. ပေါ့ပေ့ါပါးပါး ရယ်ကြတာပေါ့.. :) :) Like & Share လုပ်ထားပါ.. ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူများ အတွက်သာ..
အရမ်းကို ရယ်ရလွန်းလို့ပါကွယ်... ကြိုက်သလိုကြည့် ကြိုက်သလောက်ရှယ်နော်.. :D :D Like & Share လုပ်ထားပါ.. ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူများ အတွက်သာ..
ဒီနေ့ အကြိုက်ဆုံး video ထဲမှာ ဒါလဲပါတယ်... ဆရာကျလွန်းပါတယ်ကွာ.. မိုက်တယ်.. :D
ဒီဆင်လေး ဘယ်လောက်တော်လဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ...
မြန်မာပြည်ကို လာလည်ပြီး ရထားစီးမိသာ တော်တော်လေး မှတ်သွားပုံရတယ်... ကြည့်ကြည့်မှဘဲ နားလည်မှာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ.. :D :D :D မူရင်ပိုင်ရှင်ကို ခရက်တစ် ပေးပါတယ်။
Lovely Kid Dance
ဒီကလေးကတာ ကြည့်လိုက်ပါ... အနဲဆုံး သင့်ကို ပြုံးအောင် လုပ်နိုင်မှာပါ... ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ချစ်သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ Tag လုပ်... Share လုပ်ပေါ့နော်.. :)
လူတိုင်းကြည့်ထားသင့်တဲ့ video တစ်ခုပါ... ကြည့်ပြီးရင် ရှယ် ပေးကြပါ.. အဖြစ်သဘော အပြတ်သဘော တရားတွေ.. မူရင်းပိုင်ရှင်အား credit ပေးပါသည်။
မြန်မာဟုခေါ်သည်တဲ့... အကတွေက ဆန်းတယ်ဗျ.. ကြည့်ကြည့်လိုက်.. :) Share Via Ye Htut Kyaw
ကြည့်သောသူတွေရဲ့ ရင်ထဲကို တလှပ်လှပ်နဲ့ အေးကနဲ အေးကနဲ ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ နန်းသီရီမောင်ရဲ့ live ဗီဒီယိုအလန်း (မကြည့်ရသေးသောသူများအတွက် လက်ဆောင်)
စတွေ့တော့ ဟုတ်ပြီလို့မှတ်တာ.. သောက်ခွက်တွေ ပြောင်ကြတာ.. ရယ်ရတယ်... <>
ဘဝဆိုတာ တကယ်​ တိုက်​ပွဲလိုပဲ ဒါ​ပေမယ့်​ အဲ့ဒီဘဝတိုက်ပွဲကိုခံနိုင်​ရည်​ရှိ​အောင်​ လူတိုင်းကြိုးစားရမယ်​​☺ ☺ ♥ ♥ ✂ ✂ ♕ ♕ ★ ★